Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay heshay kiiskii labaad... - Axadle | Wararka Maanta – The one stop destination for Somalia
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay heshay kiiskii labaad…
Kiiska Ugu Horreeyay Ee Cudurka Coronavirus Oo Laga Helay…
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Xukumada Faderaalka Soomaaliya marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa xaqiijisay in qofkii labaad oo laga helay Coronavirus COVID-19, uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho ee caasimada wadankaan dhaca geeska qaarada Afrika.
Marwo Fowziyo Waxa ay sheegtay in qofkaas uu ahaa mid ka mid ah dhalinyaradii Saraakiisha ciidanka ah ee tababarka u aaday dalka Talyaaniga oo dhowaan dib ugu soo laabtay Magaaladda Muqdisho.
Sida wararku sheegayaan, Sarkaalkan ayaa isaga iyo 3 kale la karantiilay markii labo todobaad ka hor ka soo dageen garoonka Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya baaritaan ka dibna maanta la xaqiijiyay in laga helay xanuunkaan dilaaga ah.
Wasiir Fowziya ayaa sheegtay in ka wasaarad ahaan ay qaadayaan talaabo kasta oo xanuunkan looga hortagi karo, iyadoo Shacabka u dirtay fariin ah in ay guryohooda isaga nagaadaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa si looga hortago xanuunka waxa ay joojisay dhamaan duulimaadyada Caalamiga, shirarka,Ciyaaraha iyo waxbarashada.